Musharraxiinta oo soo saaray shan qodob oo muujinaya in doorasho xor ah aysan ka dhaceyn dalka | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Musharraxiinta oo soo saaray shan qodob oo muujinaya in doorasho xor ah...
Musharraxiinta oo soo saaray shan qodob oo muujinaya in doorasho xor ah aysan ka dhaceyn dalka
Golaha Midowga Murashaxiinta ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo ay ku qiimeeyeen xaaladda guud dalka, gaar ahaan habsami u socodka doorashooyinkii loo ballansanaa, ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay walaac uga muujiyeen shan qodob oo ay sheegeen in hadii aan wax laga bedelin aysan muuqan ififaalo ay dalka uga dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah.
“Goluhu wuxuu walaac xooggan ka muujinayaa in doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyey ay ka dhacdo dalka, isagoo ku salaynaya ifafaalooyinka muuqda ee khuseeya arrimihii ugu waa weynaa ee ahaa caqabadaha horyaala doorashooyinka dalka, kuwaas oo ay ka mid yihiin:”
1 – Maareyn la’aanta ismari-waaga ka jira habraaca doorashada Xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland, taas oo abuurtay in laba guddi doorasho ay sameysmaan.
2 – Xaaladda gobolka Gedo oo weli aan xal dhinacyada wada qanciya laga gaarin.
3 – Waxaa sidoo kale aan weli xal loo helin caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee ka taagan Gobolka Hiiraan ee deegaanka Hirshabeelle, si loo hubiyo inay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah.
4 – In aan weli dhaqaalihii doorashada meel la saarin, waqtigii doorashadana la taagan yahay.
5 – U-diyaargarowgii doorashada xubnaha AqaIka Sare oo aad u hooseeya, taas oo shaki gelinaysa in jadwalka doorashada lagu dhaqmo.
Golaha Midowga Murashaxiinta ayaa qoraalkaan ku sheegay in hadii aan xal deg deg ah loo helin caqabadaha kor ku xusan, ay dib u dhac ku keeni karto habsami u socodka doorasho hufan oo loo wada dhanyahay.
“Goluhu wuxuu ku boorrinayaa Xukuumadda iyo Madaxda Dawlad goboleedyada in ay si deg deg ah wax uga qabtaan caqabadaha hadda taagan, kana tabaabusheystaan kuwa imaan kara, si dalka looga hirgeliyo doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda,” ayaa lagu yiri qoraalka musharaxiinta.
Golaha ayaa ugu dambeyntii war-saxaafadeedkaan ku sheegay inuu ka walwalsan yahay faragelinta uu Madaxweynaha xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu weli ku hayo habsami u socodka doorashooyinka dalka.
Next articleGobolka Banaadir oo saddex dhibaato oo weyn wajahaya
XOG:Yaa bixiyey Amarkii Xayiraada ahaa ee Madaxtooyada ka saaray Guddoomiyaha Barlamanka..?
50,000 Oo Shaqaale Ethiopian Oo Loo Dirayo Imaaraadka Carabta iyo Abiy Ahmed oo…
Sawirro:Siciid Deni oo bilaabay qorshe cusub, kadib heshiiskii Dhuusamareeb
Xukun adag oo lagu riday Sargaal Soomaali Mareykan ah oo dil geestay (Daawo Sawirro)
Waa kuma janaraalka muranka badan ka dhaliyay gudaha Ciraaq?
Loolanka ka dhex bilowday Ethiopian iyo TURKISH ee magaalada MUQDISHO&Yeena soomaalida ku qanacsanyihiin
Xildhibaanada mucaaradka oo si yaab leh uga jawaabay hadalkii dowlada kasoo yeeray ee Sheekh Shariif kusocday
Booliiska Gobolka Bari Oo Gacanta Ku Dhigay Gaadiid Siday Khamri Iyo Dadkii Ka Ganacsanayay